दाँतमा तार किन बाँध्ने ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
दाँतमा तार किन बाँध्ने ?
डा. राधिका महर्जन
सामान्यभन्दा फरक (बाङ्गो) खालको दाँतलाई सही बनाउने उपकरणलाई टिथ ब्रेसेस भन्ने गरिन्छ । यसलाई दाँतमा तार लगाउने प्रक्रिया पनि भन्ने गरिन्छ । भद्रगोल रूपमा रहेको दाँतलाई टिथ ब्रेसेसले एउटै पङ्क्तिमा ल्याएर सिधागर्ने गर्छ । यसले भोजन चपाउने प्रक्रिया र दाँतको स्वास्थ्यमा समेत सुधार आउने गर्छ । ब्रेसेस दाँतको बीचको खाली ठाउँ भर्न समेत उपयोगी हुन्छ ।
दाँत सिधा बनाउने प्रक्रिया वा टिथ ब्रेसेस के हो ?
टिथ ब्रेसेसमा तारवाला उपकरण हुन्छ । जसको उपयोग चलाउन अभ्यस्त भइसकेको अर्थोडेन्टिस्टले अस्तव्यस्त वा बाङ्गो दाँतलाई मिलाउन प्रयोग गर्ने गर्छन् । सानै उमेरमा दाँत बिग्रिएका मान्छेले किशोरावस्थामा नै यसलाई सिधा बनाउनु ठीक मानिन्छ । यद्यपि वयस्क उमेरमा पनि यसलाई सिधा बनाउनु गलत भने हुँदैन । दाँतमा तार लगाएर त्यसलाई मिलाउनुको अर्थ एकातिर केही दिनमा दाँतको व्यवस्थापन भएर सामान्य अवस्था बनोस् भन्ने हो भने अर्को खाएको कुरा राम्रोसँग चपाउन सकियोस् भन्ने हो ।
दाँतको सामान्य सुधारको लागि एक अर्को विकल्प पनि छ । यसमा अलग प्रकारको उपकरणको समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसलाई अलाइनर या इनभिजिबल ब्रेसेस भन्ने गरिन्छ । यो उपकरण अनुसार हामीले यसलाई आवश्यक परेको बेलामा दाँतबाट हटाउन पनि सक्छौं । किनकि साधारण ब्रेसेसको जस्तो यो तारबाट बाँधिएको हुँदैन । यो पारदर्शी पनि हुन्छ यसकारण वयस्क मान्छेका लागि यो बढी स्वीकार्य छ ।
यदि अर्थोडेन्टिस्टको सल्लाह नलिने हो भने एक पटक दाँतको उपचारगरिसकेपछि फेरि पनि पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छन् ।